April 2022 - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Kuleli sonto KUSAZIWAYO NEMALI sixoxa neNdlovukazi Mapule, umsakazi nomlingisi. Uwumsakazi nesikhulu sezokukhangisa kwiNanda FM kanti useke walingisa kwiMbewu neDurban Gen
UmNyango wezeziMali, oholwa wu-Mnu u-Enoch Godongwana, uyaqhubeka nosizo lukutakula amabhizinisi akhinyabezwe iCOVID-19, udlame lwangoJulayi nezikhukhula
Imininingwane yosizo lwemali kosomabhizinisi abakhahlanyezwe yizinhlekelele ezihlasela zilandelana. INTATHELI YOMBELE iyabika
UMNYANGO wezeziMali umemezele imininingwane yesikhwama sokulekelela osomabhizinisi akhahlanyezwe yiCOVID-19, udlame olwabheduka ngoJulayi ngo-2021 KwaZulu-Natali naseGauteng nezikhukhula ezisanda kuba khona.
Ungoti wezokhwakha wase-University KwaZulu-Natal uMnu uSibusiso Sithole uthi kufanele kulekelelwe abantu abazakhelayo ngongoti
Ongoti bathi akufundiswe abantu ngenkanankana yokuguquguquka kwesimo sezulu ukuhlenga impilo, umnotho nemisebenzi. USLINDILE KHANYILE uyabika
KUZODINGEKA zonke izinhlaka zomphakathi ukuthi zibambisane ukuphucula impilo yabantu ngezidingo ezihlukene ukunciphisa ingozi yezikhukhula ngoba asikho isisombululo esisodwa futhi abantu ngeke bayeke ukufudukela emadolobheni ngoba bebheka amathuba angcono emisebenzi.
UNkk uMemory Dlamini, umsunguli wemikhiqizo yesikhumba, i-African Memories yaseThekwini, KwaZulu-Natali
Baphemba kabusha abakhiqiza izimonyo zesikhumba emva kokuwiswa yiCOVID-19 nezidubedube zangoJulayi. Omunye wabo uxoxe noSLINDILE KHANYILE
NGESIKHATHI esabamba amatoho wayehlala efuletheni nowesifazane owayenengane eyayihlushwa yisikhumba ine-eczema. Wayinika umuthi wokugcoba ayezihlanganisele wona ngezithako zemvelo wathi akawuzame abone ukuthi ngeke yini wayisiza ingane.
ONksz uMpho Serabela noDimakatso Ngoveni, abanikazi beTwin Chicks yaseNorth West
Kuyacathuleka ezintokazini ezingabafuyi ezixosha ikati eziko emindenini yazo. Baxoxe noTEBOGO MOKWENA
NGENKATHI abangani ababili baseGoli, eGauteng, beqala ipulazi labo lezinkukhu iTwin Chicks bakwenza begqugquzelwa wukufuna ukuqinisekisa ukuthi izizukulwane ezilandelayo zingantuli imali.
UMnu uMpumelelo Zikalala uchaza izizathu ezenze inkantolo ichithe isicelo sikaKelly Khumalo kwelikaSenzo Meyiwa
Asenze kangcono ukulwa nezinselelo esibhekene nazo futhi sifunde emaphutheni amadala, kuloba uBusi Mavuso
KUNINGI osomabhizinisi ababhekene nako: ukubhebhetheka kweCOVID-19okusha, ukucisha kukagesi okuqhubekayo, impi ephazamisa ukuhwebelana emhlabeni nesimo sezulu esibi esidala umonakalo; njengezikhukhula ezenzeke KwaZulu-Natali.
Usengcupheni umnotho waseNingizimu Afrika, kuloba uNtokozo Biyela
KULELI sonto ngifisa sibheke izinto ezenzeke emasontweni amabili edlule lapho sibone khona izikhukhula zenza umonakalo ongakaze ubonakale KwaZulu-Natali.
UNkk uLindiwe Mngadi, umsunguli wenkampani yamabhodwe Ukhamba Cookware yaseThekwini, KwaZulu-Natali
UKUBHUNTSHA kwezinhlelo zokubuyela embonini ayifundele nayizwa ngaphakathi ngenxa yeCOVID-19 kuphenduke isibusiso njengoba egcine eqhamuka nomqondo webhizinisi elingavamile kubantu abamnyama.
UMnu uKibiti Ntshumaelo weLekwa Consulting Engineers yaseKurhuleni, eGauteng
NAKUBA sekuphele iminyaka ewu-20 esiza ewunjiniyela futhi ethuthukisa izindawo namalokishi kodwa usomabhizinisi odabuka ePhuthaditjaba, eFree State, usawuthanda umsebenzi wakhe. Ukusiza abantu bathole izinto ezincane abanye abazithatha kalula njengokukwazi ukuvula umpompi yinto emjabulisayo nokukwazi ukuxazulula izinkinga athuthukise abanye abantu yikona okumkhuthazayo.
Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noVusi Zondi, i-social cohesion advocate emNyangweni wezobuCiko namaSiko, umphathi wezinhlelo nowayewumdidiyeli wezinhlelo kwiGagasi FM
Yebo, bengiphiwa abantu abahlukene, ikakhulukazi izihlobo.
Kulinganiselwa ukuthi umnotho waseThekwini ulahlekelwe wuR737 million kusukela ngesonto eledlule ngenxa yezikhukhula
Izithombe: wuGoogle nesithunyelwe
Abalimi baxwayisa ngengozi uma ingasheshi ukulunga ingqalasizinda elinyazwe yizikhukhula. USLINDILE KHANYILE uyabika
KUMQOKA ukuthi kusheshiswe ukulungisa ingqalasizinda ecekeleke phansi KwaZulu-Natali ukuze kuzophinde kuqhubeke kahle ukuthutha izimpahla eNingizimu Afrika ngoba uma kungenzeki loku kungagcina sekunomphumela omubi emnothweni, ikakhulukazi kwezolimo.
UMnu uThulani Zulu, umsunguli weSpillion Arts yaseMandeni, KwaZulu-Natali
UWUMUNTU oseloku kwathi nhlo ukhonze ukugqoka izinto ezihlukile futhi bekumchaza nokubona izinto ezinobuciko obugqamile. Kepha wayengakaze acabange ukuthi lolo thando lungaba yibhizinisi eselivuthwe ngale ndlela okuyiyo manje.
NGIBHALA le ngosi inhliziyo yami ayiyinhle neze ngenxa yesimo sezikhukhula esihlasele iKwaZulu-Natali. Ngibhala nje imibiko ikhomba ukuthi sekudlule abantu abawu-448 esifundazweni.
NGEMVA kokubona ukuthi ukulinda uhulumeni ukuthi unike abalimi abamnyama umhlaba kuwukulinda umnyama ongenafu, umlimi wesifazane waseLimpopo uthi wazilungiselela ukuthi abe wumlimi ongawasebenzi amakhemikhali ukulima.
I-SOUTH African Special Risks Insurance Association (iSasria) isiqoke uMnu uMpumelelo Tyikwe ukuthi abeyisikhulu esiphezulu esisha. UTyikwe uthatha izintambo kuMnu uCedric Masondo, okuphela inkontileka yakhe ngoMeyi. UTyikwe uneminyaka engaphezu kwewu-35 esebenza embonini yezimali. I-Sasria yinkampani yomshwalense kahulumeni ekhokha uma izimpahla zicekelwe phansi odlameni nangezibhelu ezifana nezaqubuka ngoJulayi wango-2021.
UMNYANGO wamaBhizinisi kaHulumeni uthi usebenzisana neTransnet, uhulumeni waKwaZulu-Natali ne-Eskom ukuzama ukubuyisela isimo kwesejwayelekile ekusebenzeni kwechweba laseThekwini. Ukusebenza kuleli chweba nakwamanye amabhizinisi kuphazanyiswe yizikhukhula ezihlasele kulesi sifundazwe, nokugcine kubikwe ukuthi zidlule nemiphefumulo yabantu abangaphezu kuka-300. Lo mnyango uthe ukusebenza kwemikhumbi bekumisiwe kuleli chweba kanti kukhona nengqalasizinda ecekeleke phansi
NGEMVA kweminyaka ewu-23 esebenza emNyangweni wezeziMali nemihlanu ewuphethe, uMnu uDondo Mogajane, usethi khumu. UMogajane, owumqondisi-jikelele emnyangweni, uyashiya ngoJuni. Ememezela lezi zindaba, uNgqongqoshe uMnu u-Enoch Godongwana uthe uMogajane ukhethe ukungayivuseleli inkontileka … Read More
Cabangisisa futhi uzihlole ngaphambi kokuqala ibhizinisi, kuloba uNtokozo Biyela
KULELI sonto ngithanda sibheke indaba yokushiya emsebenzini uziqalele ibhizinisi lakho, into eshayisa ngovalo kwabaningi. Uma ubheka uyabona ukuthi kukhona abantu abanengcindezi yokufuna ukushiya emsebenzini abakuwo bayosungula okungokwabo.
UMnu uMpumelelo Zikalala uchaza umthetho okuhloswe ngawo ukulawula isibalo sabantu bakwamanye amazwe abaqashwa eNingizimu Afrika
UMnu uGodfrey Rasogo weRasogo Gardens yaseRustenburg, eNorth West
Kumvulele umnyango kwezolimo ukuzihlupha ngezinhlobo zika-lettuce. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA
MHLA uMnu uGodfrey Rasogo eqala ukuzwa ngokulima ngaphandle kokusebenzisa inhlabathi wafunda okuningi ngo-lettuce nokuthi unamuphi umsoco. Waqaphela ukuthi nakuba abantu babewudlela ukunciphisa umzimba kodwa wawungasuthusi ngendlela ababecabanga ngayo.
UMnu uSisekelo Luna, umsunguli we-African Pride, eyenza izikhwama eziyinguganaboya
KUBO bonke ubunzima asebeke babhekana nabo baqhubekile bama ngenxa yokuthi ibhizinisi labo lihlukile kunamanye futhi izimpahla abazidayisayo zinethuba lokwenza izinto ezinkulu, okubalwa kuzona ukuqasha abantu abaningi.
Yebo, ngangiphiwa eyokuphatha esikoleni. Kwakuvame ukuba wuR2 ngosuku.
UMnu u-Itumeleng Hlapane, umsunguli weShape Café, yaseGoli, eGauteng
YIZE ebhekane nobunzima esaqala ibhizinisi waze waphoqeka ukuthi alivale, waphinde walivula kodwa ukholwa wukuthi maningi amathuba embonini yokuvubela nokudayisa ikhofi.
NAMHLANJE ngithanda sixoxe ngokushintsha indlela esenza izinto ngayo siyisizwe, ikakhulukazi esinsundu, kwezamabhizinisi noma izinto eziphathelene nezamabhizinisi.
Isikhulu esiPhezulu seFNB Retail uMnu uRaj Makanjee
I-FNB nezinhlelo zokuthuthukisa amakhasimende. USLINDILE KHANYILE uyabika
U-FNB uqhamuke nezindlela ezintsha zokuheha amakhasimende amasha nokwenza lawa akhona ahlale futhi asebenzise eminye imikhiqizo yawo ngokuwalekelela akwazi ukufinyelela ezintweni angenazo, ikakhulukazi lezo ezidinga ubuchwepheshe besimanje.
Umkhulumeli weKhomishini yokuNcintisana uMnu uSipho Ngwema
IKhomishini yokuNcintisana izophenya ngotaku lwabalimi abasafufusa
UKUZE iqonde ukuthi kungani abalimi abasafufusa beshaywa indiva yizinkampani ezinkulu, iCompetition Commission isiyethule uphenyo lomphakathi oluzobheka ukuthi kungakanani ukuncintisana emakethe, indlela okuklanywa ngayo amanani emikhiqizo, izingqinamba ezibhekana nabalimi, ikakhulukazi abasafufusa.
UNgqongqoshe wezeziMali uMnu u-Enoch Godongwana ugcine isethembiso ayesenzile ngentengo kaphethroli
Kubhekwe ukuthi unciphe umthwalo wentengo kaphethroli. USLINDILE KHANYILE uyabika
KUYE ngamagama enkehli ngemizamo yokuphungulela abantu baseNingizimu Afrika umthwalo wokubiza kwentengo kaphethroli. Kusukela ngoLwesithathu kulindeleke ukuthi intela ebizwa nge-general fuel levy yehle ngoR1.50.
Osekhaleni lokufundisa ngamalungelo abathengi ukhonze imisebenzi elwela abantukazana. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE
ABANTU baseNingizimu Afrika bayazi ngamalungelo abo njengabathengi kodwa abangakuqondi kahle wukuthi kufanele bawasebenzise kanjani la malungelo ukuze abasize. Loku kudalwa yimvelaphi yabantu, indawo abahlala kuyo kanjalo nohlanga lwabo.
UNksz uKgomotso Kgaswe, umsunguli weWoke Motswana, yaseRustenburg, eNorth West
Ukuhlala elungele ukushintsha ukwenza kuhlenge ibhizinisi lakhe ngezikhathi zobunzima. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA
UKUBA necebo lesibili kuhlenge ibhizinisi lakhe kwagwema nokuthi angashaywa yinduku eyodwa kabili yokugcina ephoqeka ukuvala ibhizinisi ngenxa yomphumela omubi wegciwane iCOVID-19.
Yebo, ngangiphiwa u-50c noma uR1 uma ngiya esikoleni.